Ukugqwala | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Indlela yokuvikela i-"Cathedral" eliphakathi kwezifo nezinambuzane
Phakathi nesikhathi sokuthuthukiswa okusebenzayo kwezobuchwephesha kwezolimo, kulula ukuthola izinhlobo eziphakathi kwamapheya ezifanele izimo ezithile. Kunezinhlobonhlobo zamapheya, kusukela ekuqoqweni kuya kuthiwa "abasebenzi". Izinhlobo "zokusebenza" zivivinywa isikhathi eside futhi zinhlobonhlobo zamapheya. Lokhu kufaka phakathi "i-cathedral" yepeyari, inqobe uthando lwabalimi ngenxa yokunethezeka kokunakekelwa kanye nemiphumela ebikezelayo.
Amathiphu amahle kakhulu wokunakekela unyaka
I-Godetia iyimbali yensimu yaminyaka yonke evela emndenini wabesifazane. Kunezinhlobo ezingaba ngu-20 zezitshalo ezingatholakala emazwekazini aseMelika. Izimbali zesitshalo zifana ne-azaleas. I-Godetia iyinhle yokuqala emndenini wayo futhi ijwayele ukusetshenziselwa ekwakhiweni kwendawo yase-landscape. Uyazi?
Ukutshala okufanele nokunakekelwa kwe-periwinkle
I-Periwinkle iyimbali enhle futhi enesicathulo, evame ukusetshenziselwa izingqungquthela nezitshalo nezimbali lapho zihlobisa izingadi, amapaki kanye nezindlela. Namuhla kunezinhlobo ezingaba ngu-12 zalesi sitshalo, ngayinye inezici zayo zangaphandle, kepha uma ikhulile, idinga cishe indlela efanayo.
Uma uhlwanyela i-parsley entwasahlobo, izitshalo ezikhulayo ensimini evulekile
I-Parsley ingenye yezitshalo zokuqala ukujabulela entwasahlobo ngemifino kanye nephunga elimnandi elimnandi. Ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwamavithamini nama-microelements, kusetshenziswe ngokubili kokupheka kanye nemithi. Abalimi abanolwazi bathi ukutshala okulungile kwe-parsley entwasahlobo emhlabathini ovulekile kuzohlinzeka isivuno esihle kakhulu.
Indlela yokubhekana nezinambuzane nezifo eziyingozi ze-Tui
Enye yezinto ezivame ukuvuna yi-thuja. It itshalwe emapaki, izintambo, zihlobisa indawo eduze nezakhiwo zokuphatha, ngokuvamile zihlwanyelwe endaweni yezidaka noma zegadi. Ngeshwa, i-thuja ijwayele izifo nezinambuzane, indlela yokubhekana nayo, sicabangela kule ngxenye. Indlela yokubhekana nezifo ze-thuja Ukulwa nezifo ze-thuja kungaba, kepha kungcono ukuzivimbela.
Indlela yokunakekela i-epiphyllum yesitshalo
I-Epiphyllum cactus iyisitshalo se-epiphytic enezimpande zomhlaba. Iziqu zombala obala obala obala oluhlaza noma indlu yesonto, nge-wavy noma emaphethelweni. Lesi sitshalo sifinyelela ukuphakama okungaba ngu-60-70 cm, ngakho-ke sidinga ukwesekwa. Ihlumela linomumo we-funnel, ubude bayo bufinyelela ku-40 cm. Izimbali ze-cactus zinemibala ebomvu, emhlophe, ebomvu, ephuzi, ephuzi, ububanzi bayo buhluka phakathi kuka-10-12 cm.
Indlela yokubhekana nezifo nezinambuzane ze-aronii (i-mountain ash), izithelo ezimnyama
I-Chokeberry inegciwane lesandulela ngculaza, ngakho-ke izifo nezinambuzane ziphazamisa kakhulu. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi lesi sifo singahluka kakhulu kuye ngokuthi indawo yendawo, isimo sezulu, ukusondela kwezinye izitshalo nezinye izici. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi yiziphi izinambuzane nezifo ezingabhekana nazo lapho ukhula i-chokeberry ukugwema izinkinga ngesitshalo.
Indlela yokutshala i-mint engadini
I-Mint ingenye yezinongo ezidume kakhulu, ngaphandle kokungenakwenzeka ukucabanga ukunambitheka kwezitsha eziningi nazo zonke iziphuzo eziyizintandokazi zakho (kwanele ukukhumbula uMojito odumile - i-cocktail eqabulayo ehlotshaniswa nehlobo, ulwandle nokungajabuli kahle). Uyazi? I-Mint isetshenziswe isintu kusukela esikhathini esidlule.
Izifo ezinzima: ukuvimbela, izimpawu kanye nokwelapha
Iplamu lokutshala ngamatshe ingenye yezitshalo ezivame kakhulu. Njengazo zonke ezinye izithelo nezithelo zezithelo, ama-plums akwazi ukuhlaselwa yizinambuzane kanye nezifo ezihlukahlukene. Ukuze ukulima kwalesi sitshalo kuletha injabulo kuphela, futhi ukuvuna kwakuphakeme kakhulu futhi kukhululekile, zonke izivande kufanele zikwazi izifo ze-plum "ebusweni" futhi zikwazi ukubhekana nazo.
Indlela yokubhekana nezifo zama-clove
I-Carnation ingenye yezimbali ezithandwa kakhulu ezisetshenziselwa ukusika izimbali. Ikhulile emhlabathini ovulekile nasendaweni yokugcina izithombo. Izimbali zasendle nezensimu ngokuvamile zivame ukugula ngezifo ezihlukahlukene. Awukwazi ukusho mayelana nezitshalo zokushisa okushisa, okuvame ukuthinta amagciwane, isikhunta, ama-virus.
Izici zokukhula kwe-Chabo: ukuhlwanyela izithombo nokunakekelwa ensimini
Namuhla sizogxila ekukhuleni kwe-Chabo ekudleni. Leli thande liye lathandwa ngabalimi abaningi bezimbali ngoba kusukela ezinsukwini zokuqala zehlobo kuze kube sekupheleni kwekwindla lesi sitshalo siyakuthanda ngezimbali ezingadliwa njengesipho noma zisetshenziselwa ukwakha izingoma. I-Carnation Shabo ikhula kuze kube ngu-60 cm, kanti isikhathi esisodwa sokukhula sinika amahlumela angu-35.
Indlela yokuqeda ukugqwala kwezitshalo
Igama elithi "ugundane" elihlobene kakhulu nensimbi. Kubuye kuthiwa uhlobo lwesifo sefungal of izitshalo ezihlukahlukene, okuyinto ekwazi ukubhubhisa iningi plantings, uma hhayi ukubhekana nayo. Yisiphi isibungu esiyingozi? Ukubola akugcini nje ukulimaza ukubukeka kwesitshalo, kodwa futhi kuyisichitha ngaphakathi.